UMpress Carlota waseMexico: Imbali ebuhlungu
UCarlotta wayemfutshane uMpress waseMexico, ukususela ngo-1864 ukuya ku-1867. Wayegula ngenxa yokugula kwengqondo emva kokuba umyeni wakhe, uMaximilian , egcinwe eMexico. Wahlala ngoJuni 7, 1840 ukuya kuJanuwari 19, 1927.
Wayebizwa ngokuba nguCarta eMexico, uCharlotte eBelgium naseFransi, kunye noCarlotta e-Italy. Wazalelwa uMarie Charlotte u-Amélie Augustine Victoire uClémentine Léopoldine, naye u-Marie Charlotte Amelie Augustine Victoire uClementine Leopoldine.
INkosikazi uCharlotte, eyayibizwa ngokuba yiCarta, yayiyintombi yedwa kaLeopold I waseSaxe-Coburg-Gotha, ukumkani waseBelgium , umProtestanti , noLouise waseFransi, ongumKatolika . Wayengumzala wokuqala ka-Queen Victoria kunye nendoda kaVictoria, uPrince Albert . (Uyise kaVictoria no-Albert uyise ka-Albert u-Ernst babengabantakwabo baseLopold.)
Uyise wayetshatile kwiConcess Princess Charlotte waseBrithani Enkulu, kulindeleke ukuba ekugqibeleni abe nguKumkani waseBrithani; I-British Charlotte yafa ngenxa yeengxaki emva komhla emva kokubeletha unyana onokuzalwa emva kweeyure ezingama-50 zomsebenzi. Kamva watshata noLouise Marie wase-Orléans, onguyise owayengukumkani waseFransi, kwaye baqamba intombi yabo uCharlotte ukuba bakhumbule umfazi wokuqala kaLeopold. Babenabantwana abathathu.
ULouise Marie wafa xa intombi yakhe uCharlotte waseBelgium yayishumi kuphela. UCharlotte wayehlala ixesha elininzi kunye nogogo wakhe, uMaria Amalia weeNkcazo ezimbini, u-Queen of France, watshata noLouis-Philippe waseFransi.
UCharlotte wayaziwa njengomntu onzulu kwaye onobuqili, kunye nokuhle.
UCharlotte wadibana noMaximilian, u-Archduke waseAustria, umntakwabo waseHabsburg waseAustrian uMlawuli uFrancis Joseph I, ehlobo le-1856 xa wayeneminyaka elishumi elinesithandathu.
Unina kaMaximilian U-Archduchess uSophia waseBavaria wayetshatile kwiArchduke Frances Charles wase-Austria.
Iimvumi zexesha zicinga ukuba uyise kaMaximilian wayengenalo iArchduke, kodwa kunoko uNapoleon Frances, unyana kaNapoleon Bonaparte . UMaximilian noCharlotte babengabesibini abazala, bobabini behla ku-Archduchess uMaria Carolina wase-Austria kunye noFerdinand I weeNkcazo ezimbini, abazali baka-Charlotte unina ongumama uMaria Amalia no-grandfather uMaximilian wase-Naples noSicily.
UMaximilian noCharlotte babethandana, kwaye uMaximilian wacebisa umtshato wabo nguyise kaCharlotte uL Leopold. Wayeyithanda kakhulu inkululeko yakhe. UCarlota wayenomdla kunye noPedro V wasePortugal noPrince George waseSaxony. UCharlotte wakhetha uMaximilian ngaphezu kukayise u-Pedro V, kunye noyise wakhe bavumile umtshato, baza baqalisa iingxoxo malunga nodada.
UCharlotte utshatile uMaximilian ngoJulayi 27, 1857, eneminyaka eyi-17 ubudala. Lo mbhangqwana osemtsha wawuhlala kuqala eItaly kwibhotwe lakhiwa nguMaximilian kwi-Adriatic, apho uMaximilian wayekhonza njengorhuluneli yaseLombardy naseVenice kuqala ngo-1857. Nangona uCharlotte wayezinikezele kuye , waqhubeka eya kwimibutho yasendle aze ahambele amabhantshi.
Wayeyithandwa ngumkhwekazi wakhe, uMphathiswa uSophie, kwaye waba nolwalamano oluhle kunye noninazala wakhe, u-Empress Elizabeth wase-Austria, umfazi womntakwabo omdala, uFranz Joseph.
Xa imfazwe yaseNtaliyane yenkululeko, uMaximilian noCharlotte babaleka. Ngomnyaka we-1859, wasuswa kwifom yolawulo lwakhe ngumntakwabo. UCharlotte wahlala kwibhotwe ngelixa uMaximilian waya eBrazil, kwaye kuthiwa uye wabuyisela isifo esiyingozi esasifumana uCharlotte kwaye yenza ukuba bakwazi ukuba nabantwana. Nangona bahlala benomfanekiso womtshato ozinikeleyo kuluntu, uCharlotte kuthiwa wenqabe ukuqhubela phambili ubudlelwane bomtshato, egxininisa kumagumbi okulala ahlukeneyo.
UNapoleon III wayegqibile ekubeni anqobe iMexico eFransi. Phakathi kweentshukumiselo zesiFrentshi kwakukunciphisa iMelika ngokuxhasa i-Confederacy. Emva kokutshatyalaliswa e-Puebla (isabhiyozelwa ngabantu baseMexico-baseMelika njengeCinco de Mayo), amaFrentshi azama kwakhona, ngeli xesha lilawula ulawulo lwaseMexico City.
I-Pro-French yaseMexico yafudukela ekumiseni ubukumkani, kwaye uMaximilian wakhethwa njengoMlawuli. UCharlotte wamncenga ukuba amkele. (Uyise wakhe wayenikelwe kwitrone yaseMexico waza wayilahla, iminyaka ngaphambili). UFrancis Joseph, uMlawuli waseAustria, wagxininisa ukuba uMaximilian anike amalungelo akhe kwisihlalo sobukhosi saseAustria, kwaye uCharlotte wamtshela ukulahla amalungelo akhe.
Bashiya i-Austria ngo-Ephreli 14, ngo-1864. NgoMeyi 24 uMaximilian noCharlotte-ngoku baziwa ngokuba yiCarta - bafika eMexico, bebekwe etroneni nguNapoleon III njengoMlawuli kunye noMpress waseMexico. UMaximilian noCarlota bakholelwa ukuba bancedwa ngabantu baseMexico. Kodwa ubuzwe baseMexico bebenokuphakama, uMaximilian wayenomdla kakhulu kubantu baseMexico ababexhasa inkxaso yobukumkani, balahlekelwa inkxaso ye-papal nuncio xa ebhengezela inkululeko yonqulo, kwaye i-USA eyamelwane yayingeke ivume ukulawula kwayo njengemthethweni. Xa iMfazwe YaseMelika yaphela, iUnited States yaxhasa uJuárez malunga namaqela aseFransi eMexico.
UMaximilian waqhubeka nemikhwa yakhe yobudlelwane nabanye abafazi. UConcepción Sedano yLeguizano, oneminyaka eyi-17 ubudala waseMexico, wazala unyana wakhe.
UMaximilian noCarlota bazama ukumkela njengeendlalifa zeentombi zentombi yaseMexico yokuqala uAgustin de Itúrbide kodwa umama waseMerika wamakhwenkwe wathi unyanzelekile ukuba anike abantwana bakhe. Ingcamango yokuba uMaximilian noCarlota babenayo, ngokuqinisekileyo, bathunjwa abafana baqhubela phambili ukunyaniseka kwabo.
Kungekudala abantu baseMexico babenqaba ukulawula kwamanye amazwe, kwaye uNapoleon, nangona isithembiso sakhe sokuhlala exhasa uMaximilian, wanquma ukuhoxisa imikhosi yakhe.
Xa uMaximilian enqaba ukushiya emva kokuba amabutho aseFransi amemezele ukuba aya kuphuma, amabutho aseMexico ayebamba uMlawuli.
Carlota e Yurophu
UCarta waqinisekisa indoda yakhe ukuba ingayidli. Wabuyela eYurophu ezama ukufumana inkxaso kumyeni wakhe. Ukufika eParis, watyelelwa ngumfazi kaNapoleon u-Eugénie, owathi walungiselela ukuba ahlangane noNapoleon III ukuze athole inkxaso yakhe yolawulo lwaseMexico. Wavuma. Kwintlanganiso yesibini, waqala ukukhala kwaye akazange akwazi ukuyeka. Kwintlanganiso yesithathu, wamxelela ukuba isigqibo sakhe sokugcina amabutho aseFransi avela eMexico aphelileyo.
Uthe wangena kwizinto ezinokubandezeleka okukhulu, ezichazwe ngelo xesha ngunobhala wakhe ngokuthi "ukuhlaselwa okubi kwengqondo." Wabayika ukuba ukutya kwakhe bekuya kubuthiwa. Wayechazwa njengokuhleka nokukhala ngokungafanelekanga, kwaye uthetha ngokungathandabuzekiyo. Wenza ngokumangalisayo. Xa wayeya kutyelela upapa, wayeziphatha ngokumangalisa kangangokuthi upapa wamvumela ukuba ahlale ubusuku baseVatican, engavumiyo yowesifazane. Umntakwabo ekugqibeleni weza kumthabatha, waya kuhlala eMiramar.
UMaximilian, ukuva ngokugula kwengqondo yomfazi wakhe, akazange aphelise. Wazama ukulwa nemikhosi yaseJuárez, kodwa wahlulwa waza wabanjwa. Abaninzi baseYurophu babethelela ubomi bakhe. Ekugqibeleni, wabulawa yiqela lokudubula ngoJuni 19, 1867. Umzimba wakhe wangcwatyelwa eYurophu.
UCarlota wabuyela eBelgium ngaloo hlobo. UCarta wayehlala kwindawo yokuzimela ekupheleni kweminyaka engamashumi amathandathu ebomini bakhe, eBelgium naseItali, engalokothi aphulule impilo yakhe yengqondo, mhlawumbi angazi ngokupheleleyo ngokufa komyeni wakhe.
Ngomnyaka we-1879, wasuswa kwinqaba eTururen apho wayethathe umhlala-phantsi xa i-castle yatshisa. Waqhubeka nokuziphatha kwakhe okungaqhelekanga. Ngexesha leMfazwe Yehlabathi I Umlawuli waseJamani wayekhusele isiqithi eBouchout apho wayehlala khona. Wafa ngoJanuwari 19, 1927, we-pneumonia. Wayeneminyaka eyi-86 ubudala.
Olongezelelweyo Ngomphefumlo uCarta waseMexico
Haslip, Joan. Umqhele waseMexico: uMaximilian kunye noMpress wakhe uCarlota. 1971.
Ridley, Jasper. Maximilian noJuarez . 1992, 2001.
Smith, Gene. Maximilian kunye neCarlota: I-Tale of Romance and Tragedy. 1973.
UTylor, uJohn M. Maximilian noCarlotta: Ibali le-Imperialism .
UMaximilian kunye neCarlotta waseMexico: iincwadi ezininzi zeBhayibhile, kuquka imisebenzi yesiNgesi, iSpanish nezinye iilwimi.
Imitshato emine kaKumkani Philip II waseSpain
UElizabeth Elizabeth I
Imfazwe Yehlabathi I: Intsimi kaMarshal John French
Abaqeqeshi abakhutheleyo abakwiiKholeji zeKholeji
Yintoni I-Dinosaur Yakho Oyithandayo Yathi Ngawe?
IToyota Smart Stop Technology
Amava okuBomi: iNkqubo yeMfundo kaRhulumente yintsilelo
Yintoni Oyenzayo Kakhulu?
UJulian kunye nokuwa kwePaganism
Ixesha elidlulileyo leMbali yoMbutho weeLungelo
"UThixo Uphumle Niyavuya NgamaGentlemen" AmaChords & Lyrics